HIKVISION DS-2CE15A2P CCTV - BaganMart
Dulas VC200-1(SOLAR VACCINE REFRIGERATOR) ဆိုလာ ရေခဲသေတ္တာ
ှSamsung CCTV SNO 7080R
Made in Japan Panasonic LED
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 231 view counts
HIKVISION DS-2CE15A2P CCTV
Model : DS-2CE15A2P
လုပျငနျးအမညျ : SUPREME ARIESTEL CO.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01 212299,
Resolution : 700 - 799 TVL
Effective Range : 20 - 29 Metres liters
Features : Night Vision liters
Type: : Bullet Camera
When it comes to security and surveillance, nothing beats the Hikivision DS-2CE15A2P-IR bullet camera. Easily installable given the mountable make, the bullet camera works well both indoors and outdoors. The bullet camera from Hikvision improves surveillance and security in your premises as it is equipped withahigh quality image sensor, and high resolution lenses. It works onaDC 12V power supply and consumes 1.8 W of power and4W with IR cut filter switched on. The bullet camera measures 70 x 149.5 mm in dimension and weighs 360 gms. The camera has an operating temperature of -40 to -60 degree C.
ခေတ်နှင့်အညီ Desingဆန်းသော Hik Vision CCTVနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း၊အပြင် မှာဖြစ်စေ အတွင်းမှာ ဖြစ်စေ ကြိုး နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဖြစ်စေ၊ ကြိုးမဲ့ စနစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်သည်။သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အဆင်ပြေပြေဖြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် အားထားရသော စက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ရာဇဝတ်မှုများ လျော့နည်းအောင် အထောက်အပံပေးသော စက်ပစ္စည်းတစ်မျိူး
ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ ရှော့ပင်းစင်တာများ၊ ဟိုတယ်အဆောက်အအုံများ၊ဆေးရုံများ၊ ရုံးများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ လေဆိပ်အဆောက်အအုံများ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ ကျောင်းများ၊နေအိမ်များ နှင့် အခြားအဆောက်အအုံများကို လိုအပ်သလို တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး လုံခြုံရေး တိုးမြင့်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော် တို့ရှဲ့Supreme Ariestel Co.,ltd ကိုသာဆက်သွယ်လိုက်ပါလို့ ဖိတ်ခေါပါရစေ။
Hikvision 600 TVL DIS 40 Mtr IR
Hikvision CCTV DS-2CE15A2P
Alarm bell for fire control system panic button PY-JL188-6
For HIKVISION DS-2CE15A2P CCTV
May I get the quotation for "HIKVISION DS-2CE15A2P CCTV " ?